QM:Abaar halis ku haysa 20 malyuun oo ku sugan Yemen, Somalia, Koonfurta Sudan iyo Nigeria - Horn Future
QM:Abaar halis ku haysa 20 malyuun oo ku sugan Yemen, Somalia, Koonfurta Sudan iyo Nigeria
New York(Horn Future)-Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa welwel aad u weyn ka muujiyay sababta heer aanan hore loo arag oo ah baahiyaha bini’aadamnimo ee caalamiga ah, ee ah abaarta halista ku haysa in ka badan 20 malyuun oo qof oo ku nool Yemen, Somalia,Koonfurta Sudan iyo Nigeria.
War qoraal ah oo uu golahani ka soo saaray kulan furan oo isku gu yimiday ayaa waxa uu tilmaamay iska hor’imaadada iyo dagaallada socda inay leeyihiin cidhib-dambeed ba’an oo bini’aadamnimo oo burbur ah,kuwaas oo noqday sababaha ugu waaweyn ee abaartan.
Xubnaha golaha ayaa ka codsaday xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay, Antonio Guterres inuu soo gudbiyo warbixin kooban inta lagu jiro bisha Oktober ee soo socota oo ku saabsan waxyaabaha gaarka ah ee ku gudban dagaalka ka dhanka ah halista abaartan haleeshay dalalkan 4ta ah, iyo inuu soo gudbiyo talooyin gaar ah oo ku saabsan si wax looga qaban karo arrimahan ku gudban.
Golaha ayaa waxa uu muujiyay sida ay uga niyad jabsan yihiin in qaar ka mid ah dhinacayada dalalkan 4ta ah oo ku guul-dareysatay inay hubiyaan gaadhitaanka raashinka gargaarka ah oo joogto ah ee lagama maarmaanka ah iyo mid bini’aadamnimo.
Waxa golahani ugu baaqay dhinacyadan inay oggolaadaan in si nabad galyo ah gargaarkan u gaadho si loo fududeeyo helitaanka lagama maarmaanka ah ee cuntada, shidaalka iyo qalabka caafimaadka dal kasta iyo guud ahaan deegaanadiisa.
Warbaahinta caalamka ee ku sugan xaruntan ayaa cadeeyay in Golaha Ammaanka uu fariin adag u diray dhinacyada is-diidan ee dalalkaas,isaga oo ugu baaqay in ay raacaan ilaalinta dadka rayidka ah iyo in loo fududeeyo inuu soo gaadho gargaarku iyaga.
« IOM:50 dhalinyaro isku gu jirta Somali iyo Ethiopian oo si u kas ah loo qarqiyay Yemen	» dalka Kanada oo ka dhisay xero soohdinta Mareykanka si looga hortago qulqulka qaxootiga